Maxaa kasoo kor dhahay markabka lagu haysto xeebah Puntland? | puntlandi.com
Maxaa kasoo kor dhahay markabka lagu haysto xeebah Puntland?
Burcadbadeeda xeebaha Puntland ku haysta markab laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta ayaa lagusoo waramayaa inay markabaasi kusoo xirteen xeebta tuulada Xaabbo ee gobolka Gardafu sida ay Puntlandi u xaqiijiyeen maamulka degmada Calluula.
Maraakiibta dagaalka ee Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya oo xiriir la sameeyay ragga hubeysan ee afduubtay markabaasi oo lagu magacaabo Aris 13, ayaa u sheegay inay dalbanayaan madax furasho aysan weli u cayimid inta ay le’eg tahay.
Maamulka degmada Caluul iyo odayaasha deegaanka oo maanta kulan wada qaatay ayaa isla qaatay inaan lagu dag dagin in xoog lagusoo furto markabka, waxaana taas badelkeed la isku afgartay in loo tago ragga haysta markabka, lana weydiiyo waxay damacsan yihiin.